I-Asus Zenbook 14 -Ukuphononongwa kwebhotile encinci enephunga elimnandi | Iindaba zeGajethi
UAsus luphawu olusekwe kwimarike yeelaptop, yiyo loo nto sithanda ukukuzisa uhlalutyo lolu hlobo lwezixhobo amaxesha ngamaxesha, ukuze uthathe isigqibo sokuba loluphi olulungele iimfuno zakho kunye nezinto ozithandayo. Kule meko sinaye I-Asus Zenbook 14, ilaptop yazo zonke izinto ozithandayo, enobuntu obuninzi kunye nescreen esikhulu.
Hlala nathi kwaye ufumane uhlalutyo lwe-Asus Zenbook 14 (UX433FN) ngezibane zayo kunye nezithunzi, uphononongo ngokweenkcukacha oza kufumana ukuza kuthi ga ngoku. Ukuba ucinga ukufumana ilaptop, hlala phantsi, kuba kuya kufuneka sithethe ngesi sixhobo.
Njengamaxesha onke te Siyakhumbula ukuba ungaya ngqo kwicandelo onomdla kakhulu kulo, kunye nephepha lobuchwephesha, Ukuba, kwelinye icala, uyicacisile, siyakumema ukuba ume apha ukuze uyithenge ngokuthe ngqo ngexabiso elihle kwiAmazon. Nayiphi na imibuzo enokuthi ivele ayicingi ngayo kwaye uyiyeke kwibhokisi yezimvo okanye kwiiNethiwekhi zethu zoLuntu.
1 I-Asus Zenbook 14 (UX433FN) Idatha
2 Unxibelelwano kunye nemithombo yeendaba emininzi: Isikrini esikhulu
3 Uyilo kunye nezixhobo: ezintle kwaye ziyingqondi
I-Asus Zenbook 14 (UX433FN) Idatha
I-Asus Zenbook 14 iinkcukacha zobugcisa
Umzekelo I-Zenbook 14
Isikrini 14 intshi (35.6 cm) IPDHD ye-IPS epheleleyo
Inkqubo Intel i5-8265U - i3-8145U-i7-8565U
GPU I-UHD Graphics 620 okanye i-NVIDIA GeForce MX150
i-ram I-16 GB DDR4 SDRAM
Ukugcinwa kwangaphakathi I-256 / 512GB PCIe x2 SSD
Unxibelelwano I-1x i-USB-C 3.1 - i-1x i-USB-A i-3.1-i-1X i-USBA i-2.0-i-1x i-HDMI-iTreyi ye-SD-i-3.5mm uJack
Ibhetri 47 watt / ngeyure
U bunzima 1.45 Kg
Ubona njani, Kwimeko yale Asus Zenbook 4 sinezixhobo ezifanelekileyo ezihlawulelwayo, ngaphezulu kwesivumelwano esaziwayo phakathi kwe-Intel's i3 ukuya kwiiprosesa zoluhlu lwe-i7, ezihamba kunye neNVIDIA ukuphucula kancinci ukusebenza kwemizobo. I-SSD ukuya kuthi ga kwi-512 GB ngaphandle kwamathandabuzo yinto enika amandla ngakumbi, hayi kule, ukuba ayizizo zonke iilaptops. Nangona kunjalo, apho le Asus Zenbook 14 inokuqaqamba ngakumbi ngokubonakalayo ichanekile kwezinye izinto.
Unxibelelwano kunye nemithombo yeendaba emininzi: Isikrini esikhulu
Amehlo akho "aya" ngokungathandabuzekiyo kwiphaneli yangaphambili, kwaye sineefreyimu ezingaphezulu eziyi-6,1mm, ezihamba ne-2,9mm emacaleni kunye ne-3,3mm emazantsi, oku kubangela ukuba kungabikho ngaphantsi Iphaneli engaphambili engama-92% yesikrini se-LCD ngetekhnoloji ye-IPS (100% sRGB kunye ne-178º yombono) kwaye inikezela isisombululo esisemgangathweni se-FullHD. Kwimeko apho unokuthandabuza, le Asus Zenbook 14 iphakama iye kwezona meko zokukhanya zintle kwaye inephaneli efanelekileyo ukuyisebenzisa ngaphandle kweesentimitha ezili-14 ezingaqhelekanga. Iphaneli ibalasele, nangona umgangatho wokulinganiswa kwayo ungangcono, into ekufuneka ihlengahlengiswe ngesandla kukhetho lomthengi.
1 x i-USB 3.1 iGen 2 yohlobo C ™ (ukuya kuthi ga kwi-10 Gbps)
1 x i-USB 3.1 Uhlobo A (ukuya kuthi ga kwi-10 Gbps)
1 x Umfundi wekhadi le-MicroSD
Isandi siyazifumana Izithethi zestereo ziphinde zalungiswa nguharman / kardon, eyomeleleyo ifemi. Zivakala ngokuvakalayo, ziviwa kakuhle kwaye zingaphezulu ukusetyenziswa kwemihla ngemihla, nangona ngokobuqu ndihlala ndibheja kwizithethi zangaphandle kuzo zonke iintlobo zeekhompyuter.
Uyilo kunye nezixhobo: ezintle kwaye ziyingqondi
Ezi ntlobo zeelaptops ziyilelwe ukuhamba nathi phantse naphi na, yiyo loo nto uAsus ethathe isigqibo sokubheja kwakhona kwi umbala oluhlaza kunye nobhedu kuhlelo ebesikade silivavanya. Njengoko isihloko sisitsho, ilaptop entle nenengqiqo ekwabonelelwa ngesilivere. Iyonke yenziwe ngeplastiki, sinekhibhodi ebuyisiweyo kunye Uhambo oluphambili lwe-1,4mm kuphela eyenza ukuba ukhululeke kakhulu ngokuchwetheza okuninzi.
Ikwaqaqambisa ihenjisi yayo enomdla ebizwa Phakamisa, ilaptop leyo inokuhlala kwiphaneli yayo ukuya kuthi ga kwi-145º ephakamisa ikhibhodi kancinci kwi-angle ye-3º, Ndiyithandile kakhulu loo nto kuba ndingomnye wabo bantu basebenzisa ikhibhodi endisebenza kuyo ngoluhlobo. Ngokwethiyori oku kuphucula ukuveliswa kwesandi kunye nokupholisa isandi. Ukwenza oku, xa usonga isikrini, indawo yayo esezantsi igubungela umphezulu, asazi ukuba oku kuyakuchasa njani ukuhamba kwexesha. Ngokombono wam ngumbono olungileyo.
Eyona nto iphambili kuyo ngamanani iphaneli "susa kwaye ubeke" esebenzayo ngokucinezela indawo ethile yephedi yokuchukumisa. Ngokwam, iphedi yokuchukumisa ibonakala iluhlaza kwaye incinci, kodwa yingxaki engapheliyo kwezi zininzi zezi zixhobo. Kwelinye icala, kuyathakazelisa ukongeza oku kunokwenzeka ukuze unganikeli ubungakanani becompact okanye intuthuzelo onokuyinikwa yiphedi yamaqhosha. Inyaniso yahlukile, njengoko ixesha lihamba usebenzisa iphedi yokuchukumisa njengebhodi yezitshixo ayisengombono olungileyo kwaye ugqibela ngokuchwetheza amanani njengoko uhlala usenza kwikhibhodi yesiko, phezulu, kuba uswele loo "mpendulo" evela izitshixo. Kwinqanaba lokusebenza Sifumana ilaptop ekhusela ngokulula kwiofisi nakwimisebenzi yemihla ngemihla, ekubonakala ukuba iyasilela kwimidlalo enzima ngakumbi kodwa oko kusivumela ukuba sidlale imidlalo embalwa kwiiCities Skylines, umzekelo.
Kwinqanaba lokuzimela u-Asus uthi iyakwazi ukufikelela iiyure ezili-13 zokusebenzisa, amava ethu ahluke kakhulu, malunga neeyure ezintandathu zokusetyenziswa ngokuthobekileyo»Ngaba yinto endiye ndakwazi ukuphuma kuyo, ngaphandle kokuthetha ukuba xa siqala ukuphakamisa ukukhanya kwesikrini, ukuhlela iifoto okanye iividiyo kunye nokudibanisa izinto nge-USB-C, ukuzimela kwehla.
Iphaneli yangaphambili esetyenziswe kakuhle kunye noyilo olukhulu
Kulunge kakhulu ukuyisebenzisa kodwa hayi ukukhanya okungaphezulu
Yenza into entsha ngephedi yokuthinta kunye nendawo yokuchwetheza
Iphedi yokuchukumisa inokubanzi
Zisa iKhaya leWindows lifakelwe kwangaphambili
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Asus Zenbook 14-Ukuphononongwa kwebhotile encinci enephunga elimnandi
Uyenza njani iakhawunti ye-Skype